मोदीको भ्रमणलाई विवादित बनाउनु आवश्यक छैन : डा. भट्टराई «
मोदीको भ्रमणलाई विवादित बनाउनु आवश्यक छैन : डा. भट्टराई
दमौली- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई विवादित बनाउनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । पारिवारिक भेटघाटका सिलसिलामा तनहुँ आएका भट्टराईसँग व्यास नगरपालिकाले बुधबार गरेको भेटघाटमा बोल्दै भट्टराईले मोदीको भ्रमणले नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुध्रिएको बताए ।
“छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्दा कहिलेकाँही झगडा हुन्छ,” उनले भने, “विगतमा भारतसँग केही कुरामा असमझदारी थियो, त्यस्तो अवस्था सँधै रहँदैन ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु खुशीको कुरा भएको भन्दै भट्टराईले भ्रमणलाई विवादित बनाउनु आवश्यक नभएको बताए । “नेपालको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा अडान राख्न सक्नुभयो कि भएन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो,” नयाँ शक्तिका संयोजक समेत रहेका भट्टराईले भने ।
भारतीय सांसदले मिथिला राज्य भारतको भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई डा. भट्टराईले बेबकुफी भनाईको संज्ञा दिए । “म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु, अराजक प्रवृत्ति खालको मान्छे हुनुहुन्छ । चर्चामा आउन बोलिएको कुरा हो,” उनले भने ।
व्यास नगरपालिकाको विकासको सन्दर्भमा बोल्दै भट्टराईले भविष्यमा व्यास विकासको केन्द्र बन्न सक्ने भएकाले गुरुयोजना बनाएर कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।
अहिले सबै पार्टीको साझा मुद्धा आर्थिक समृद्धि नै भएको चर्चा गर्दै भट्टराईले अरुले विकास गर्न खोजे खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त भएकोले यसलाई व्यवहारमा उतार्दै जनताको सेवामा लाग्न भट्टराईले सुझाव दिए ।
कानुन निर्माणमा ढिलाई, साधनस्रोत अभाव जस्ता कारणले स्थानीय तहले सोचे जति काम गर्न नसकेको आफूले समेत महशुस गरेको भन्दै भट्टराईले यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट समेत आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले कानुन अभाव, जनशक्ति अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएपनि जनतालाई दिने सेवामा कुनै कसुर बाँकी नराखेको बताए । साथै उनले नगरपालिकाले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुका बारेमा समेत भट्टराईलाई जानकारी गराएका थिए ।